Ungahlala kwindlu yabucala ekwintendelezo!! ●Iibhedi ezingamawele ezingama-30 zabantu aba-5 ●Igumbi lokuhlambela elizimeleyo elinomgangatho wokufudumeza umoya osembindini we-air-conditioning ● Zizipholele nje intsapho
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe ongu孙小乾
U孙小乾 ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Wamkelekile "kuMhlobo Omdala".
Ekupheleni kuka-2020, uQian, u-Angel, uDean, kunye no-Ybcc benza umhlobo omdala we-akhawunti ye-media yoluntu, besebenzisa oku njengendawo yokuqala ukutyelela abahlobo bamagcisa, baxoxe ngezimo zobomi, kwaye babonise abafundi uhlobo olwahlukileyo lobomi.
Ime kumbindi wedolophu yaseBeijing, ekufuphi neUniversal Studios yaseBeijing kunye neGrand Canal Forest Park. Ukuhlala apha kunokonwabela ukuzola nobuhle obahluke ngokupheleleyo kubomi basezidolophini, ukuphefumla umoya omtsha wangaphandle, kwaye wonwabe. kube lula ukuphulaphula namakhulukhulu izandi zeentaka. ntle esi sixeko singqongwe iivenkile lula, iimarike yemifuno kunye zokutyela ezininzi ngaphakathi yokuhamba-imizuzu elishumi, leyo kunokwanelisa amaphupha abahlali 'yokuba umpheki uze ube sisiqingatha seyure-ukutya takeaway ngqo inkonzo xa bediniwe.
·Ukuhlala kwi-Suites ziisuite ezizimeleyo ezinamagumbi amabini kwintendelezo, ezigubungela indawo ye-31 square metres, ziyakwazi ukuhlalisa abantu abayi-2-5 kunye noomatrasi be-tatami, igumbi lokuhlambela elizimeleyo, i-air-conditioning kunye nokufudumeza umgangatho.
Ime kumbindi wedolophu yaseBeijing, ekufuphi neBeijing Universal Studios kunye neGrand Canal Forest Park, umgama wemizuzu elishumi xa uhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- 孙小乾